शिवम् सिमेन्टको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? हेर्नुस् तथ्याङ्कसहित:: Artha Dabali
शिवम् सिमेन्टको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? हेर्नुस् तथ्याङ्कसहित
शिवम् सिमेन्ट विंस २०६० साल जेठ १३ गते प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत दर्ता भएको हो ।
चैत १० गतदेखि नेप्सेमा सूचिकृत भइ कारोबार भएको यस कम्पनीको उच्च मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६७९ सम्म पुगेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रू. ३ सयमा आइपिओ जारी गरेको थियो ।
कम्पनी विंस २०७२ साल साउन ८ गते पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको हो । कम्पनी प्रदेश नम्बर ३ अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा नगरपालिका वडा नम्बर १६ हटियामा अत्याधुनिक मर्मत प्रविधियुक्त प्लाण्ट एण्ड मेसिनरी जडिट क्लिंकर तथा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरेको कम्पनी हो ।
नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट प्रतिदिन ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट र ३ हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ । प्रतिदिन कम्पनीले ३ हजार मेट्रिक टन शिवम् र शिवम् सिमेन्ट ब्राण्डको ओपिसि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, १ हजार ९०० मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तथा अपुग क्लिंकर आयात तथा खरिद गरी आपुर्ति गर्ने गरेको छ ।
कम्पनीले गत वर्षको अन्त्यसम्ममा रू. १ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ७५ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा करिब ४१ प्रतिशत बढी हो ।
त्यस्तै विक्रीबाट ३९ दशमलव ४० प्रतिशत गत वर्ष आम्दानी गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको अत्यसम्म कम्पनीले विक्रीबाट रू. १० अर्ब २६ करोड ५० लाख ६४ हजार आम्दानी गरेको उल्लेख छ ।
शिवम् सिमेण्टले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई ३ महीनामा १५ दशमलव ७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीको वैशाख ९ गते सम्पन्न भएको साधारणसभाले पारित गरेको हो ।
आगामी दिनमा आउन सक्ने बजारको मागलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले पिपिसि, स्लाग सिमेण्ट लगाएतका अन्य विभिन्न ब्राण्ड र ग्रेडका सिमेण्ट उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने योजना लिएको छ ।
अध्यक्ष : सुरेन्द्र कुमार गोयल
प्रमुख कार्यालय : अनामनगर
विक्रि प्रबन्धक : सिद्धार्थ क्यापिटल
कम्पनीको ६१ दिनको कारोबारमा बुधवार सेतो मैनबती आकृति बनेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य विहिवार बढ्ने सकेत देखिन्छ ।
कम्पनीको आरएसआई ६३ दशमलव २० रहेको छ । खरिद विक्री चाप सन्तुलमा रहेको छ ।
कम्पनीको स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १ दशमलव ७४ रहेको छ । उतारचढाव सामान्य छ ।
कम्पनीको १४ दिने २६ दिने र एक दिने मूल्य रेखा एक आपसमा नजिकिएका छन् । कम्पनीको एक दिने मूल्य रेखालाई १४ दिने मूल्य रेखाले काटेर माथि गएको छ । कम्पनीको शेयर मुल्य रू. ६५३बाट बढेमा रू. ६७९ पुग्छभने घटेमा ६४६ पुग्न सक्छ ।